Zvirongwa zveSystem - Dhijitari Signage & Vhidhiyo Wall Software yeMabhizinesi
Yakagadzirwa Pa October 31, 2019
Kuti utange ne Easy Multi Display, unofanirwa kuona kuti Hardware yako yakatarwa nenzira kwayo. Tevedza gwara iri pazasi kuti uve nechokwadi chekugadzirisa komputa yako. Kuti uwane zvakanyanya kubva kuTrans Multi Display, tinokurudzira kurongeka kunotevera.
Computer desktop inomhanya Windows 10.
A keyboard uye mbeva.
Kadhi remifananidzo rinokwanisa kubatanidza akawanda kuratidza. *
* Ona yedu inotsigira chinyorwa pane iyo makadhi ekushandisa pano.
Uchishandisa System: Win 7 64-bit / Win 8.1 64-bit / Win 10 64-chidimbu
Graphics Kadhi: NVIDIA GTX 1050 / Radeon RX 550
Disk Dura: SSD 240 GB
Kubva pa4 kusvika ku5 Screens
Uchishandisa System: Windows 10 64-chidimbu
Graphics Kadhi: Nvidia GTX 1660 / AMD Radeon RX 580
Disk Dura: SSD 480 GB
Graphics Kadhi: Nvidia RTX 1660 / AMD RX VEGA
Ndinogona kushandisa laptop yangu?
Zvimwe. Zvinoenderana nekuti mangani eTV Displays aunoda kushandisa.
Mazhinji laptops chete ane akakwana kuratidza adapter (yemukati yekubatanidza mapoinzi) e1 Display. Nekudaro, kana izvi zviri zvese zvaunoda, ipapo laptop inomhanya yeWindows 10 inoshanda zvakanaka.
Kana yoh Laptop ichangobva kuitika (Pasina gore pane gore) uye yemhando yepamusoro ($ 700 +) uye ine USB3 ports, unogona kushandisa rudzi urwu rwekushandura (USB3 kune HDMI) kuwedzera 1 kana 2 skrini.
Mazwi ekutenga ichi chigadzirwa: USB3 HDMI Converter
Ndapota kutevera uye kufanana nesu;
Iyo Sylvanian Mhuri, chakadii chiitiko kubva kuJap
Tichifunga murwi wemombe yakatikomberedza, Rombo rakanaka,
🤖 Ndatenda DaftPunk 2003-2021 🤖 Nyore
Clément alias @ xuchangan34 anotaura Chinese, Englis